Siminaar loo furay maamulka kooxaha heerka koowaad ee Soomaaliya + SAWIRRO – Gool FM
Siminaar loo furay maamulka kooxaha heerka koowaad ee Soomaaliya + SAWIRRO
jilacow July 29, 2017
(Muqdisho) 29 Luulyo 2017 Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa Siminaar u furay qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan Soomaaliya.
Aqoon kororsigaan ayaa loo furay maamulka kooxaha heerka koowaad, kaasoo loogu tala galay in la helo koox maamulkeeda dhameystiran.
Furitaanka Siminaarka ayaa waxaa kasoo qeyb galay Xubno ka socdo Wasaaradda Dhalinyarada iyo Isboortiga iyo Madaxda Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta oo uu hoggaaminayay C/qani Saciid Carab iyo marti kale oo lagu casuumay.
Madaxweynaha xiriirka kubada cagta Soomaaliya C/qani Saciid Carab oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in Siminaarkaan u jeedkiisu uu yahay in la helo koox maamulkeeda uu u dhameystiran yahay iyo in kooxaha ay helaan Xoghaye aan magac u yaal aheen si ay nasiino u helaan Gudioomiyaasha naadiyada
Siminaarkaan oo socon doono laba maalin ayaa waxaa furay Agaasimaha Guud ee wasaarada dhalinyarada Isboortiga Mudane Isaaq kaasoo wakiil ka ahaa Wasiirka iyo ku xigeenkiisa.
Ku biirida Antonio Candreva ee Chelsea oo dhibaato ku ah Man United (Sidee?)
Barcelona oo ogolaatay ugu dan bayntii in arinta Neymar ay kala xaajooto PSG
Zanetti oo si kulul u dhaleeceeyay xidiga ay isku dalka kasoo wada jeedaan ee Icardi https://t.co/qAmosrDrG6